Qonda ubuhlakani ngesikhathi se-World Creativity Week.
Qonda Ubuhlakani Bakho Ngesikhathi se-World Creative Week
I-UKZN Extended Learning (i-UEL) izoba namawebhina amabili ukugubha i-World Creativity and Innovation Week (i-WCIW) phakathi komhla we-15 nowama-21 kuNdasa ne-World Creativity and Innovation Day (i-WCID) mhla wama-21 kuNdasa. I-WCIW ibekelwe ukugubha zonke izinhlobo zobuhlakani, kuthi i-WCID yona ibe wusuku lokugubha olwabekwa yi-United Nations ngowezi-2001, eyaqala ukugujwa ngo-2002.
Umqondo wokuthi ubuhlakani kufanele busebenze ukuxazulula zonke izinkinga waqala ukuphakanyiswa ngu-Marci Segal, obecwaninga ngobuhlakani kusukela ngonyaka we-1977. Wabona isidingo sezindlela ezintsha zokucabanga ukubhekana nezinselelo zangomuso. USegal ubonga uDkt Sidney Parnes, owamqeqesha, ngokugujwa kwe-WCID.
I-United Nations yabona ukuthi indawo egqugquzela indlela entsha yokucabanga nobuhlakani ingasiza ukuxazulula izinkinga futhi ilekelele ukufeza Izijongo Zentuthuko Esimeme umhlaba wonke. Ngonyaka wezi-2006, i-WCID yelulwa yaba yisonto ukwandisa isikhathi sokusebenzisa ubuhlakani. Yasimama yaba yi-WCIW, kusukela ngosuku lokuzalwa luka-Leonardo da Vinci (umhla we-15 kuNdasa). Lolusuku lusemqoka ngoba u-Da Vinci cishe ungomunye wabantu ababenobuhlakani nobuciko ngesikhathi ayephila ngaso.
Amawebhina e-UEL azogxila kubuhlakani kwezemfundo kanti azophathwa yizifundiswa ezihlonishwayo emphakathini kwezobuhlakani nokuqamba okusha oDkt Jim Friedman (waseMiami University, eMelika) noSolwazi Stefan Hüsig (wase-Universitat Chemnitz, eJalimane).
Imininingwane yamawebhina ithi:
Umphathi wohlelo: nguDkt Jim Friedman
Usuku: uLwesihlanu, mhla we-16 kuNdasa wezi-2021
Umphathi wohlelo: nguSolwazi Stefan Hüsig
Usuku: uLwesibili, mhla wama-20 kuNdasa wezi-2021
Isikhathi: ngehora lesibili emini
Amagama: ngu-Sarah Haffenden
Ababengabafundi Ababumbe Iqembu Lababili, Bethula Isingili
Abaholi Bangomuso Badinga Amakhono Amasha
Umfundisi Wezomdanso E-UKZN Uzokwethula i-“PARK DANCES #1” e-Durban Botanic Gardens